सन्धिखर्कमा डा. गोविन्द केसीको रिहा गर्नुपर्ने माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँचीमा ज्ञापनपत्र (तस्बिर सहित) (२०७४ पौष २६, बुधवार)
सन्धिखर्क, अर्घाखाँची (अर्घाखाँचीडट्कम) । अदालतको मानहानी गरेको आरोपमा सोमबार रातिदेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका डा. गोविन्द केसीको रिहा गर्नुपर्ने माग गर्दै अर्घाखाँची जिल्लाको सन्धिखर्कमा विरोध कार्यक्रम गरिएको छ ।
विभिन्न संघ- संस्था, पत्रकारहरुले आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रम पछि डाक्टर केसीको रिहा गर्नु माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँचीमा ज्ञापनपत्र बुझाईएको छ ।
अर्घाखाँचीभर केसीको गिरप्तार गरे देखी सोमबारबाट व्यापक विरोध गरिएको छ ।
उता मंगलबार डा. केसीमाथि लागेको अदालतको अवहेलना मुद्दा न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको बेञ्चले हेरेको थियो। हिजोको इजलासले उनको बयान लिएको थियो। बयान सकिएपछि प्रहरीले उपचारका लागि डा. गोविन्द केसीलाई वीर अस्पताल लगेको थियो। हिजो उनलाई वीर अस्पतालमा नै भर्ना गरेर राखिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै डा. केसीले सोमबार दिउँसोदेखि अनसन सुरु गरेका थिए। लगत्तै उनीमाथि अदालतमा मानहानीको आरोप लागेको हो।